DHIR FOR CAADADA: DECOCTIONS IYO FUSADO LEH DIB U DHAC, DHIRTA KU CAAWIN DOONAA IN AY KEENAAN CAADADA, SIDA LOO DHISO IYO CABBITAANKA SI LOO DEDEJIYO GEEDI SOCODKA? - BEER CAGAARAN
Isticmaal dhir for caadada: decoctions iyo infusions, sida loo kariyo iyo sida loo cabbo?
Dib u dhac ku yimid caadada haweenka badankood waa heer. Hormonal fashilaadda, qabow, hababka bararsan ee jirka, stress, hurdada oo aan lahayn, miisaan culus oo dhicis ah ayaa sababi kara caadada in aaney iman wakhtiga.
Dad badan ayaa maqlay in dhirku kicin karo imaatinka maalmaha muhiimka ah isla markaana caadaysta wareegga.
Tani ma runbaa, ma caawinaysaa in ay sameyso caadada, miyay ammaan tahay in la isticmaalo dhir ujeeddooyinkan, sida loo sameeyo maraqyada iyo daawooyinka kale iyo sida loo cabo si caadada u dhacdo - tani waa maqaalkeenna.
Miyay ammaan tahay in la sameeyo caadada mar hore?
Waxaa jira kiisas markii aad rabto in muddada aad timaaddo. Waxaa jiri kara sababo badan oo tan:
dhacdo muhiim ah maalinta la filayo bilowga bisha;
safar fasax ah;
Waxaa macquul ah in la sameeyo maalmo muhiim ah maalintiiba - laba ka hor waqtiga, isticmaalka mukhaadaraadka iyo daawooyinka hoormoonada, laakiin isticmaalka waxay keeni karaan waxyeelo badan - miisaan kordha, niyad jabka, hormoon la'aanta hormoonka.
Aad bay ufiican tahay in la isticmaalo dhirta iyo cagaarka ay ku jiraan hormoonka dabiiciga ah iyo saliidaha lagama maarmaanka ah, oo ay ku jiraan dhir. Decoction ah ee cagaaran ee dhexdhexaad ah ma waxyeelayn doonaa jirka iyo waxaa laga yaabaa in saameyn la doonayo, laakiin, dabcan, ma damaanad qaadin.
Maxay dhirta u caawin kartaa daahitaan?
Pertushka waxaa ku jira phytohormon dabiici ah - mararka jirka, waxay kicisaa soo saarida estrogen ee jirka haweeneyda.
Haddii dib u dhac ku yimaado caadada hormoonka, tusaale ahaan, waxsoosaarka xad-dhaafka ah ee progesterone, taas oo u oggolaanaysa endometrium in ilmo-galeenka inuu u bislaado ilaa uu diyaar u yahay cusbooneysiin, kadibna estrogen ee dhirta ayaa xakameyn doonta tallaabada progesterone iyo caadada haweenka bilaabi doonto.
Caawinta yareynta qiyaasta progesterone iyo saliidaha lagama maarmaanka ah, iyo caddad badan oo fitamiin C ah oo cagaarka ah.
Saliidaha muhiimka ah ee dhirta ayaa sidoo kale gacan ka geysta foosha ilmaha, taas oo keenaysa imaatinka caadada.
Waa muhiim! Ka hor inta aadan isticmaalin decoction dhir, waa inaad kala tasho dhakhtarkaaga si aad u ogaato sababta dib u dhac. Si looga hortago uurka, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo baaritaanka ultrasound ee ilmo galeenka lagana baaro hCG.
Decoction dhirta hore wuxuu keeni karaa dhicin, oo ay ku jirto dhamaystirnaanta, taas oo halis gelineysa dhibaatooyinka waaweyn ee mustaqbalka - hababka bararsan, adhesions ee tuubooyinka, kicinayaan koritaanka burooyinka ee uuruska iyo ugxan-yari, waxay sababaan khalkhalka hormoonnada iyo xitaa runtii!
Tilmaamaha iyo ka-hortagga isticmaalka
Tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka decoction ee cagaarka ayaa u adeegi kara:
baahida loo qabo in la xoojiyo caadada maalin ama laba maalin ka hor;
khalkhalka hormoonnada ee sababay xaddi badan oo progesterone ah;
sigaarka oo dib loo dhigay, oo aan la xiriirin uurka.
Haddii dib u dhac ku yimaado diiqada, markaa cagaarka saladhaha ayaa yarayn doona xanaaqa niyadjabka, waxay gacan ka geystaan ​​kordhinta dhererka jirka ee endorfin iyo melatonin waxayna dardar galin doonaan helitaanka dabiiciga ah ee maalmaha muhiimka ah. Maraq dhoobo ayaa ka yareeya caabuqa habka taranka haweenka iyo in la hagaajiyo diidmada.
Waa mamnuuc in la isticmaalo dhir daawo sida daawooyinka xaaladaha soo socda.:
uurka waqti kasta - estrogen iyo saliidaha lagama maarmaanka ah ee dhir leh waxay sababi karaan dhicin;
Munaasabada ma cabbi karto decoction ee geedo udgoon in ka badan laba toddobaad, isticmaal tiro badan oo ka mid ah abuurka dhirta - waxay leeyihiin hanti waxyeelo leh. Marka la daaweynayo decoction iyo saliidaha, qiyaasta waa in la fiiriyaa, maadaama isticmaalka xad-dhaafka ah ee daroogada uu kicin karo wicitaan dhiigbax culus iyo caadooyin ka badan inta caadiga ah ee caadada.
Sida loo isticmaalo cawska: talaabo talaabo talaabo ah
Digniin! Ka hor intaanad bilaabin qaadashada daroogada, waa inaad la tashataa takhtarkaaga si aad uga joojiso uurka iyo xanuunada hormoonnada ee daran, iyo sidoo kale cudurada faafa. Xaaladdan, dawadu ma caawinayso, laakiin kaliya waxay sii xumaynaysaa xaaladda. Waa in aanad halis gelin caafimaadka iyo suurtogalnimada in carruurta mustaqbalka la siiyo.
Sidee loo diyaariyaa oo u diyaariyaa daawooyinka si ay u sameeyaan muddooyin inta lagu jiro dib u dhac iyo intee in le'eg cabbitaanka?
Laga soo bilaabo xididka
Si aad u diyaariso decoction ee xididka waa ka wanaagsan inaad qaadato alaabta cusub.
20 gr. Aad u jilicsan xidid dhir;
2 koob oo biyo ah.
ku shub rootiga la kariyey ee biyo qabow;
dheriga dabka saar, oo keruubiimta ku dul gub.
karkari ilaa 10 daqiiqo;
maraq qabow, ha diyaarso ugu yaraan 2 saacadood, cadaadis.
Qaado nus koob quraarad quraacda ka dib iyo casho ka hor:
usbuuc ka hor caadada caadada - si loo xoojiyo imaatinka;
maalinta ugu horeysa ee daahinta - si loo kiciyo caadada.
Waa lagama maarmaan in la qaato maraq keeska koowaad ugu badnaan saddex maalmood, labaadna - laba maalmood oo isku xiga.
15 gr. caleemaha leh saqaf, la jarjaray oo la jajabiyay mindi;
4 koob oo biyo ah.
Diyaargarowgu wuxuu la mid yahay sida xididka:
wuxuu ku adkeeyaa laba saacadood;
Qaado 2 jeer maalintii maalintii cuntada kadib nus koob.
Habka ugu fudud ee lagu iibsan karo dhirta qalalan ee farmashiyaha ee shandadaha shaaha, waxaad isticmaali kartaa jar jartey si aad u soo dhejisid kiniinka.
Wixii diyaarinta faleebo:
qaado ama isku-darka isku-darka ah ayaa soo dhejiya galaas biyo karkaraya;
ku adkeyso 5 daqiiqo;
sifeeyaa oo cabo sida shaah laba jeer maalintii - subaxa iyo fiidkii, nus galaas ah oo faleebo ah oo lagu qasi jiray biyo kulul oo dhan.
Laga soo bilaabo saliid daawada
In farmashiyaha, waxaad ka iibsan kartaa faleebo saliid ah oo dhir ah saliidaha lagama maarmaanka ah. Isticmaalkeedu waa mid aad u fudud - dhowr dhibcood oo saliid ah ayaa lagu qasi jiray 100 millilitir oo biyo diirran ah waxaana la qaadaa 3 jeer maalintii cuntada kadib.
Waa lagama maarmaan in la isticmaalo galmo toddobaad gudaheeda.
Laga soo bilaabo abuur
Dhirta dhirta ayaa leh saameynta ugu sareysa si loo kiciyo caadada.. Diyaarinta daawooyinka:
Laba qaado oo miro ah ayaa loo baahan yahay in ay si taxadar leh u qulqulaan (waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo hoobiye loogu talagalay dhir udgoon) oo ku shub hal litir oo biyo nadiifa ah.
A jar of faleebo habeenkii dhigay meel mugdi ah qabow.
Isticmaal 2 qaado oo ah daawada 2 jeer maalintii - subaxa iyo fiidkii. Waxaad cabi kartaa wax aan ka badnayn saddex maalmood oo isku xigta.
Jilicsani waa faleebo dhalatada cusub ee biyaha karkaraya. Si aad isugu diyaariso waxaad u baahan tahay:
20 gr. cagaarka cusub ku shub nus litir oo biyo ah karkaraya;
ku duub suxuunta buste ka dibna ka tag daawada si aad u dilaacdo 2-3 saacadood;
Qaado nus koob oo quraac ka dib quraacda ka hor iyo ka hor wakhtiga jiifka - 3-4 maalmood, faleebo ugu badan ayaa la cabi karaa ilaa 7 maalmood.
Sidaa darteed, dhir u sabab ah maaddada phytoestrogens hormone-ka ah, saliidaha lagama maarmaanka ah iyo ascorbic acid waxay runtii ka caawin kartaa dhimista caadada, oo la xidhiidha xad-dhaaf ah progesterone, cudurrada bararka iyo walbahaarka. Awood u leh inuu cuno cagaarsho oo dardar geliyo imaatinka caadada, laakiin kaliya hal ama laba maalmood.
Daawada u qaad si taxadar leh, ha ka badin qiyaastakahor intaadan la tashan dhakhtarkaaga si looga hortago uurka, caabuqyada halista ah iyo jirrooyinka hormoonka.
Farshaxanka loogu talagalay bixinta